Nduzi ezumike nke Mobile Mobile | Martech Zone
Ezumike ezumike na Mobile Mobile
Satọdee, Nọvemba 23, 2013 Bọchị Sọnde, Machị 7, 2021 Douglas Karr
Black Friday dị nso na 55% nke ndị na-azụ ahịa na-eji ngwa ịzụ ahịa na ekwentị ha kwa izu! Anyị ekenyelarị nkọwa ihe ọmụma ole na ole na njem ịzụ ahịa na ekwentị mkpanaaka Ihe kpatara azụmahịa gị ji kwesị ịdị njikere maka ezumike ahụ na Rị elu nke Ahịa Ahịa, na Uru Ndị Ahịa.
Ihe omuma a site na Ahịa Blue Chip na-enye data n ’ụdị usoro aghụghọ ndị ọrụ mkpanaka ahụ na-achọ. Ghọta ọnọdụ, oge nke ụbọchị, ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ nke onye ọrụ gị nwere ike inye aka ịkwọ ụgbọala zuru oke. Inye uzo iji kwado zuta ihe na iwu ulo ahia g’enyere aka!
Tags: eji ngwadere ngwamobile ngwa ọdịnalangwa ahiaKupọns ekwentịekwentị mkpanaakaịzụ ahịa ekwentịndepụta ịzụ ahịasmartphonembadamba
Ilzụ ahịa Azụmaahịa: Mgbe Tech Na-emebi Ihe Karịa Ezi
Email Email niile nke Sizzles abụghị Spam